DHAGEYSO: Madaxweyne Gaas”Dhul Badan Oo Soomaaliya Ka Mid Ah Waa La Heystaa Oo Xur Ma Ahan” – Marqaanmedia24.com
DHAGEYSO: Madaxweyne Gaas”Dhul Badan Oo Soomaaliya Ka Mid Ah Waa La Heystaa Oo Xur Ma Ahan”
May 14, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 9
Madaxweynaha Dowlad Goboledka Puntland ahha Guddoomiyaha Golaha Iskaashiga dowlad Goboledyada oo khudbad ka jeedinayay Shirka uga furmay Baydhabo ayaa ka hadlau muhiimada kulankaas uu uleeyahay Shacabka.
Waxa uu sheegay in shirkas uu yahay mid looga hadlayo arrimo ay ka mid yihiin amniga,isl;a markaana dalaka Soomaaliya qeybaha ugu badan asyan xor aheyn oo ay Al-Shabaab heystaan.
Waxa uu sheegay in waxyaabaha lag tashanayo ay qeyb ka yihiin sidii dalka loo xurreyn laha taas oo ay ku jirto dowladnimada sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegaya in dhul badan oo Soomaaliyeed la heysto oo aan ahyn mid xor ah.
AKHRISO: Qodobadda ugu Muhiimsan ee looga hadlaayo Shirka M/Goboleedyada
DAAWO VIDEO:Qudbadahii Gaas Iyo Axmed Madoobe “Farmaajo Wuxuu Ku mashquul san yahay soo noqoshada 2020
Cabdi Weli Gaas, madaxda, siyaasiyiinta, iyo aqoonyahannada Puntland xaqiiqada ay aadka u seeggan yihiin ayaa ah in marka ay arrini siyaasad marayso aan talada masiiriga cid kale lagu halleynin oo laga na sugin sideeda ba. Xamar wax ka sheeggeedu Puntland waxba u soo kordhin mayso oo halka ay barriiqantahay hore uga sii dhaqaajin mayso. Wax aan fadeexad iyo fashil ka ahayn madaxda Puntland ka dheefi mayso cambaareynta Muqdisho ee joogtada ah. Sharafta qaaliga ah ee tolweynaha Puntland ku baheysan uun bay ka dhaawacayaan oo waxba na ugu xallismi maayaan.
Madaxda Puntland waqtigooda qaaliga ah ee ay xuma ka sheegga Xamar ku lumminayaan waxaa kun jeer u dhaami lahayd iyaga oo inta ay Muqdisho afaaraheeda in muddo ah geed iskaga laalaan deeto iyaga iyo aqoonyahannada dagalka maskaxdooda ka maalaan xalalka ku habboon xaaladda hadda taagan iyo masiirka geyigooda qaabkii loogu toosin lahaa jahada saxsan. Puntland iyo khaas ahaan beelaha Harti ee dagalka ugu tunka weyni iyaga hawl u taalla weeye habkii ay u xallin lahaayeen mashaakilka jira oo ay masiirkooda na tubta toosan ugu toosin lahaayeen. Cid kale u ma maqna oo ceel kale na u ma qodna.
Hadal badani haan ma buuxsho oo calaacal na lagu ma ciil baxo Cabdi Weli Gaasoow. Maskaxdaada maal oo halyeeyada hawsha ku la habeyn lahaa dib u haybso oo haanta dhex gee.
dhawr bilood ayaa u haray wuu galgalanayaa
waa la ogyahay in dhowr bilood u harsan yihiin
hayeeshee shidadu waxay noqon doontaa nidaamka dimocraciga ah waayo wuxuu lasoo shir tagi karaa dad baa i raba reer puntlana oo la dhacsan maamulkayga
halka haduu jiri lahaa maamul ku salaysan republic loo diidi lahaa inuu dib danbe isu soo sharaxo..
taasna waa runtiis oo dad badan oo reer punti ah oo aan jeclayn horumarka puntland baa bartilmaameedsan kara oo saas darteed uu ka dhigan karaa salaan uu kusoo noqdo.. taas waa marag ma doonto iska daah meel kalee garoowe waad u jeeday soo dhawayntii loogu sameeyey iyo wixii caleemo qoyan loo lulayey..
hadaba majeerteenoow anaga reer gaalkacyo iyo reer mudug ha nagu eedina oo dhibka uu keensaday gaas inaad idinku koow ka noqonaysaan maadama aad u kala dhuumataan gaas iyo dawladiisa dhiciska ah kadibna aad anaga nagu soo riixdaan
masoconayso taas jaale
Somaliland baa haysata myuu ka wada?! Taas waa lawada obyahay xataa KIM KARDASHIAN baa garanaysa.
FARIIN AAN HALKAAN UGU XABAALAYO AXMED KHALDAAN
ninyohow niman aan gale wadaag iyo gaardin wadaag nahay baa ila tagay shalay anigoon jawaab cad ka dhiiban waraaqo darandoori aad iigu garaacday. anoo shaqada kasii bixi raba bay si iskuma taalo ah iiga soo dul dhaceen-saasaan ku baxay ee bal hadaladii xoogaa hadaan arkaye aan goaan ka dhiibto.
waraaqdaadii shalay baad ku tibaaxday in anagoo ogsoonayn in nalagu soo aadan yahay darteed oo daruuro colaadeed oo kasoo onkadaya somaliland aan saas ku laab laabanay oo ciidamadii ka raray laaska deetana xamar aan ula cararay ciidamadii puntlasnd.., hadaan helay fursad aan ku akhriyo fariintaas markaasaan is iri hadaad ka tagto waxay igu noqon doontaa GEED XIDIDKI UGU NOQOY
AXMEDOOW SAAN IN BADAN KUU SHEEGAY INKASTOO AAD U QAADAN DOONTO SIDAADII FAAN
FACTSKU Waa anagu reer puntland maba naqaano waxa afka soomaaligu lagu yiraahdo “danqaadasho” oo micneheedu tahay inaad arin kuu qorshaysan fulinteeda aad ka gows adaygto iyadoo loo aanaynayo in “consequency”geedu ama danbarkeeda amaba aad ka dhaxasho cawaaqib xumo-tan waxaa keeni kara yaraan ciidan, ama yaraan qalab la isku daafaco bari hadii lagu soo buurto, ama adoo u baqa in lagugu goobto deetana saas madaxa lagaaga garaaco.
reer puntland dhamaantood ma yaqaanan xaalkaas waxaana daliil u ahaa bal eeg
1-inaan u bareeray sayid muxamed xooluhuu gacan ku hayey inaan ka moora duugno indhihiisoo shana. ingriis baa ka baqay oo heshiis kula soo dagdagay daraawish isagoo natiisa uga baqay kadib markay dacarta leefsiiyeen
2-hawiye inaan bada ka cabsiinay adoo og in hawiye ameericaan lafihiisa ugala baxsaday, waagii lagu bilaabayey washamsi dad badan oo idinku aad ugu horaysaan baa u qaatay SUICIDAL AMA ISDIL sababtoo ah somalidaa waxay iska dhaadhicisay cidii hawiye eed ka gashaa inaysan labo geed oo danbe calajin doonin
3-heedheh tan sedexaadna waa ciidankaan idinka laftiina idinku soo saaray deetana madaxwaynihiinii baacsi cagta cagta u saaray
waa marag ma doonto inaad lasoo shir tagi doonto riyaale iidoor muu ahayn oo wuxuu ahaa gudabiirsay. that doesnt make no sense at all. waayo idinkaa afkiina ku doortay oo xukunka gacanta ka galiyey, intaas waxaa dheer HE WAS ELECT PRESIDENT OF SOMALILAND sabab kalana XASUUSO inuu ahaa riyaale kan soo celiyey laaska kadib markuu kusoo bixiyey cagamadow reer somaliland ah, saas daraadeed marmarsinyahaaga riyaalaa jilicsanaa waa waxaan saabka gali doonin,, war ma nin iidoora baa xoreeyey laaaska? caqliga alla kaa qaadye?? waxa ku ba ay oo ku jabay waxay ahaayeen gudabiirsay lasoo khalday.
waxaad nagu eedaysay annagu reer puntland ma naqaan inaan dib u baqano oo wax dhici doiona dartood aan dib uga faagano our politcle goal
iga qor taas for good
Igaaryahow reer Mudug ee birta calashadow horta malaha waxaan qoray indhuhuun baad dul marisay oo shalay iyo maantaba si wanaagsan umaad dhuuxin.
Ta Riyaale aan ku horeeyee, waxaan ku idhi go’aan buu gaadhay ah inuu markii horena talo xumo ku tegay, kolkii danbena talo xumo ku diiday inuu rogaal celiyo. Wanaanan ku idhi Amarka Madaxweynahayaga ayaa socday. Saan shalay ku idhi aan kuugu celiyee Somaliland nidaamka ka jiraa muu ogolaanayn imikana ma ogola oo cidi kama talaabsan karto. Kumaanaan faraxsanayn Reer Somaliland ahaan labada go’aan ee uu qaatay. Tegistiisii iyo Rogaal celin la’aantiisii. Laakiinse isaga ayaanu u dooranay inuu na hogaamiyo oo amarkiisu socday.
Tan kalee ah Ciidamo Gadabguursi ah ayaa lasoo nasakhayna oo laaska qabtayna, Dee Sale bahasha ha dhabqin nin yahow. Ciidanka Somaliland qolo walba oo degta Somaliland wey ku jirtaa badankooduna wey isku dhex dhafan yihiin.
Tan aan ku idhi waad iskaga huleesheen dee waa run. Waxaanan kuugu daray C/Laahi Yuusuf waxa walba kala weynaa sidii uu Hawiye uga soo Aargoosan lahaa. Wuu ogaa in Ciidamada Somaliland kusoo maqnaayeen oo dhowr gorba la qabtay Laascaanoodna lasoo geliyay oo nawaaxigeeda lagala soo nadiifiyay. Waxa uu ka door biday Xamar iyo xumaantuu u qabay. Waa kii lahaa Bada Cas ayaan ku darayaa.
Waxa kale oo uu ogaa, in baadii iyo lacagtii aanan reer Laascaanood waxba loogu qaban jirin ee lagu maal gelinayay Doorashadiisii iyo Campaign kiisii ay Dhulbahente ka daaleen oo ay dhanka Somaliland usoo janjeedhsadeen una hanqal taagayeen in badan. Daruuraha colaadeed iyo Dhulooskii oo ku kacay inuu la dagaalamo iyo inuu intuu faraha ka qaado xagaas iyo Xamar aado, waxa uu labada doortay inuu Madaxweynenimadiisa ku mitido oo uu Aar goosigii uu ku hamiyay u suurto gasho.
Tan kalee Hawiye hadaan in yar kaa idhaahdo, dee faanka iga jooji weeye walaalow. Nimaan wax ogeyn baad u faani kartaa. Hadaad tidhi goob joog baan ahaa oo Hawiye Badaanu ka cabsiinay, waxa quman inaan runta ka sheegto in aad Xabashi kaashateen. Americanka waxa ka joogay meesha Ciidamo doonayay inay nabad wadanka kusoo dabaalaan. Caydiidna dadka ka qabtaan. Dadka reer Maraykana marka dhowr laga dilo Dawladooda ayay ku qeyliyaan.
Laakiinse Xabashidu waa cadawga koobaad ee Soomaalida. Muqdishona lama tusi karo. C/Laahi Yuusuf taariikh xumo xad dhaaf ah halkaas ka raacday. Wuxuu ku danbeeyayna weynu ogeyn oo waatii isaga iyo intii wax la wadayba Villa Soomaaliya laga soo dareeriyay. Waa tii lagu yidhi wadanka noo dhaaf Waraabayahow dad dabne ood cunto kuuma heynee. Xilkiisii xitaa muu dhameysan. Fool xumo intaas ka weyn oo nin Madax ah soo gaadhi karta anigu garan maayo. Laakiinse Madaxweyne rasmi ah markiisii horeba muu aheyn oo Hamigiisii Madaxweynenimo waxa si xad dhaaf ah uga tan batay ciilkii iyo cadhadii uu Beesha Hawiye u qabay. Taasaana sababtay in markuu maatidii iyo wixii uu soo gaadhi karayayba leefay, Ciidan shisheeyana soo adeegsaday lagu kaco oo na dhaaf lagu yidhaahdo.
Sidaan shalayba ku idhi, waad ku faani kartaa waxbaan soo laayay oo waa adiga iyo garashaadaada. Laakiine aniga shakhsiyan markaan iska hadlo inkasta oon Adadayga C/Laahi Yusuf og hadana waxa aan ogohay dhaliilihiisa ah Axmaqnimo iyo nin calool ku heyn iyo uur kutaalo dhaansatay oo qofkay mar coloobaan aanan cafin jirin. Taasaana weydaarisay fursadii uu heystay inuu is badal muuqda ka Sameeyo Soomaaliya kolkuu Madaxweynaha noqday.
Waxaad ku celcelisay axmedoow nasoo dhaaf baa lagu cabdulahi yusuf yiri .dee talada kuuguma jirto in meeshu dhul hawiye ahayd io aanay ahayn meel loo siman yahay sida baydhabo. Khaladka wayni waagaas wuxuu ahaa in xamar loo aqoonsado caasimada dalka.
.tan kele hwiye baa la xasuuqay baad lasoo shir tagtaa adigana.
Iyaga quraan bay akhrinayeen oo xalay dhalay weeye soow maaha?
Gabagabo axmedoow ogoobeey arinka madaxiisu waa ninka hadba haya hogaanka dalka oo nooxuu yahay baa dalkuna noqonayaa haduu adadag yahay sida yusuf dalkuna waa ad adkaanayaa haduy yahay qof aloiw sahalana dalku waa kala daadanayaa.
Taas waan isku waafaqsanahay ani iyo adi waayo waxaad qiratay waagii puntland qabsatay laaska ee laga cayriyey somaliland in ay ugu wacnayd riyaale talo xumidiisa halka anna aan aamin sanahay wAxa maanta puntland arag xumida baday ay tahay maamul xumo
Tan iyo shalay waxaan korjoogto ka ahaa doodan taariiqiga ah.maanan ogolaayn in aan dhabqiyo sidii MAGACYO BADAN oo kale. ee gaar ayaan ka ahaa waxaan u malaaynayaa meel halkaa loo dhaafo MA jidho.dulucda hadalkana AHMED adaa dhameeyay ragna waa kii warankiisa ku ciilbaxo ee MA aha in shaqsi muwaadin somali ah laguu dilaa adigoo waliba sheeganayo in aad madaxwaayne u tahay kaaga darane hadane in aad ku faanto sida doqonkaan anigu aan ugu Wan qalay DAMEER MADOOBE ragaanu garashadoodu waa intaa. aniga waxaan aamin sanahay in aan gacantaayda uga ciil baxay reerkan uu DAMEER MADOOBE ka dhashay.lakiin isagu wuxuu ku soo cel celinayaa hawiye ayaan ka aargutay.somali waxaay tiraahdaa.FUTO AADAN LAHAAYN LAGUMA XAARO.war anigu tigree ayaa I dilay c laahi yuusufna wuxuu ahaa shaqsi ila mid ah oo LA ii soo dul fuulay kkkkkk c laahina waa uu ogaa in waxaba uu san ka qaban karin arinkaa iyo in uu dhibane iska ahaado.waana laayska diray markii dantii laga lahaa laga gaaray……